I-plugin ye-AMP ene-Google Analytics - ZU
I-plugin ye-AMP ene-Google Analytics
Isiguquli se-HTML-to-AMPHTML kanye nama- plugin e-AMPHTML afaka ngokuzenzakalelayo amakhodi okulandelela e-Google Analytics ekhasini le-Google AMP. Ngisho nokulandelela ama-akhawunti amaningi kuyasekelwa!
Faka umaki we- <amp-analytics>
I-Accelerated Mobile Amakhasi Generator ithola ngokuzenzakalela ukuthi ngabe ikhodi yokulandelela ye-Google Analytics ifakiwe kusayithi lakho futhi ifunda i- ID yokulandela umkhondo ye-Google Analytics , okusho inombolo ye-UA .
Umkhiqizi we-AMPHTML futhi uyabona ukusetshenziswa okungenzeka kwezinombolo ze-UA , njengoba kusetshenziswa, ngokwesibonelo, ku- 'Multiple Account Tracking' . I-generator ye-AMP eku-inthanethi iguqula ngokuzenzakalela zonke izinombolo ze-Google Analytics UA ziyenze ithegi 'ye-amp analytics' futhi ngaleyo ndlela isebenze nokulandela umkhondo obekukhona ngaphambili kwe-Google Analytics ekhasini le-AMP!
Ngalolu hlobo lokuhlanganiswa kwe-Google Analytics, yonke idatha yokulandelela ye-analytics yekhasi le-AMP ivela ku- akhawunti yakho (!) Ye-Google Analytics , ngakho-ke uzoqhubeka nokuthola yonke idatha yokulandelela ye-AMP eqoqwe endaweni ejwayelekile!
I-AMP online generator isekela zonke izinhlobo ezilandelayo zeGoogle Analytics:
I-Google Analytics 360 ° (analytics.js)
I-Universal Analytics (analytics.js)
I-Google Analytics (ga.js)
Izibalo ze-Urchin (urchin.js)
Ukwenza kungaziwa i-Google Analytics IP 'anonymizeip'
Kwamanye amazwe (isb. EJalimane) kufanele kuhlangatshezwane nomunye umbandela ukuze ukwazi ukusebenzisa i-Google Analytics ngokuhambisana nemithetho yokuvikelwa kwedatha: Ukusetshenziswa kokungaziwa kwe-IP. Ngalesi sizathu, i-Accelerated Mobile Pages Generator isekela ngokuzenzakalela umsebenzi we-Google Analytics 'anonymizeip' bese isetha i-octet yokugcina yekheli le-IPv4 noma izingcezu zokugcina ezingama-80 zekheli le-IPv6 kuziro ngaphambi kokugcina idatha yomsebenzisi. Lokhu kusho ukuthi ikheli le-IP eliphelele alikaze libhalelwe i-hard drive yeseva ye-Google Analytics!
Ukwenza kungaziwa i-Google Analytics IP akusetshenziswa ngenkuthalo yi-Accelerated Mobile Pages generator, kepha kuyisethingi ejwayelekile yethegi ye-'amp -analytics 'evela emibhalweni esemthethweni ye-AMPHTML.
Idatha ngethegi ye-'amp-analytics' ngakho-ke ngokuvamile idluliselwa ngokungaziwa!
Imininingwane yokuvikela idatha ye-Google Analytics yamasayithi e-AMP
Ukuze ukwengeza okuzenzakalelayo kokulandelela kwe-Google Analytics kusetshenziswe ngokuhambisana nemithetho yokuvikela idatha, kudinga inothi elicacile kunqubomgomo yobumfihlo yewebhusayithi yakho!
Emakhasini e-AMP akhiqizwayo atholakala nge-amp-cloud.de, ekugcineni kwekhasi ngalinye le-AMP kwenziwa kwizimemezelo zokuvikelwa kwedatha ze-amp-cloud.de, equkethe imininingwane edingekayo yokuvikela imininingwane yokulandela ngomkhondo iGoogle Analytics.
Kodwa-ke, uma usebenzisa ama-plug amp we-amp-cloud AMP, kufanele ufake inothi ekulandeleni i-Google Analytics kunqubomgomo yobumfihlo yewebhusayithi yakho!
amp-cloud.de ayithathi cala nganoma yikuphi ukwephula umthetho. Kufanele uhlole futhi uqinisekise ukuthi i-akhawunti yakho ye-Google Analytics namakhasi e-AMP ahlelwe ngendlela evikelekile ngokomthetho! (Igama elingukhiye: Inkontileka yakwaGoogle Analytics yokucubungula idatha ngoku-§ 11 BDSG ).